Homs: Tantaran’ny Tanàna Syriana Revolisionera Rava · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Novambra 2012 4:22 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Italiano, Ελληνικά, বাংলা, русский, عربي, 简体中文, 繁體中文, English
Anisan'ny tanàna Syriana maro hita amin'ny lohatenim-baovao ankehitriny i Homs, izay tanàna niorina tamin'ny 2300 talohan'i Kristy. Azo tarafina amin'ny alalan'ny fahapotehan'ny fanorenana sy maritrano manan-tantara, ireo mpialokaloka an'hetsiny ary ireo maritiora an'arivony ny fahasimbana goavana nateraky ny fandaroahan baomba nandritra ny volana maro.
Homs ao amin'ny tantara
Ilay tanàna 4300taona (niorina 2300 BC ny fanorenana voalohany) antsoina hoe Homs, fantatra ara-tantara amin'ny maha Emesa azy (fanambatambarana ny andriamanitra masoandro nivavahana tao an-toerana), no tanàna fahatelo lehibe indrindra any Syria ary tanàna mirahavavy amin'i Belo Horizonte any Brezila. Maro ny toerana manan-tantara miorina ao Homs, tahaka ny moskea Khalid ibn al-Walid, ny souks mitafo, ary ahitana ny vakoka iraisampirenena tahaka ny Krak des Chevaliers sy ny Citadel of Salah Ed-Din, iray amin'ny chateau tamin'ny vanim-potoana Antenantenany lehibe indrindra voatahiry manerantany.
Vitsy ny olona mety mahalala fa ny Fehikibo Masina an'ny Masina Maria dia ao anatin'ny harena sarobidin'ny Fiangonana Um al-Zennar raha mitahiry ny fasany kosa ny Fiangonan'ny Masina Elian, niorina tamin'ny taonjato fahadimy.
Ny fahasimban'ny Fiangonana Fehikio Masin'ny Masina Maria (Um Al-Zennar) ao Homs, Syria. Loharano: Archaeo life Blog.
Ara-tantara dia tantaran'ny misitery hafahafa sy mampihomehy i Homs. Tamin'ny Desambra 1260, Hulagu resy tamin'ny Ady Voalohany tao Homs i Hulagu. Tsy niditra tao an-tanànan'i Homs izay nataony tamin'ny tanàna Syriana sy tanàna any Atsinanana ny Mongols, rehefa nisy ny angano milaza fa tsy afa-miaina ao an-tanànan'i Homs ny maingoka noho ny fisiann'ny merkiora betsaka ao amin'ny taniny. Ny reniranon'i Orontes izay mamakivaky ny tanàna no hany renirano miròna avy any atsimo mankany avaratra, raha tsy misy mpangataka hita eny an-dalambeny, izay noho ny ezaky ny malala-tanana sy ny sampan-draharaha ara-tsosialy tsara tantan'ny fokonolona.
Lahatsary tsy fahita momba ny tanàna Syriana, Homs, nozarain'ny IBN HOMS ao amin'ny Youtube, no ahitana sary tanelanelan'ny taona 1880 ka hatramin'ny 1950.
Na dia tanàna nipoiran'ny filoha anankitelon'i Syria, avy amin'ny fianakaviana Atassi, sy tanindrazan'ny fianakavian'ny vadin'i Assad (Alakhras) aza i Homs, ny mpanao fihetsiketsehana “Homsi” no anisan'ny Syriana voalohany nidina an'arivony teny an-dalambe ho fanoherana ny fitondrana Syriana. Hatramin'izay fotoana izay, niaritra ny fandarohana baomba nandritra ny vola maro ny tanàna na dia nisy aza ny antso hiarovana ny vakoka ahiana ho potika ao an-tanàna, izay ahitana ilay distrika manan-tantaran'i Bab Al Dreib. Mitatitra momba ny firodanan'ny fanorenena sy ny fahapotehana faobe any amin'ny manodidina an'i Jourat alshiah ny mpisera YouTube Saif Hurria.
Ao amin'nytumblr, mamoaka sary fampitahana ny manodidina an'i Jourat alshiah tanelanelan'ny 1930-2012 i salt-and-filfil.
Tanànan'i Homs talohan'i Assad, 1930- Tanànan'i Homs taorian'i Assad, 2012. Loharano: salt-and-filfil hita Tumblr.
Tahaka izany ihany koa no itateran'i SyriaAustraliaTv (misy dika an-tsoratra amin'ny teny anglisy) ny faharavan'ny fanorenana maro manodidiana an'i AlQusour tamin'ny 11 Oktobra 2012.
Ary mbola lahatsary hafa avy amin'ilay mpisera SyriaAustraliaTv ihany mampiseho ny faharavana goavana nataon'ny balafomanga iray tamin'ny 7 Oktobra 2012.
Martiora sy mpialokaloka
Araka ny Shaam News Network S.N.N, mihoatra ny 7208 ny maritiora any Homs ary lasa nitsoaka ny fonenany ka anisan'ny 2 tapitrisa nitady fialokalofana. Ankizy An'arivony mpialokaloka mety ho tratran'ny hatsiaka tafahoatra, noho ny ririnina any Afovoany Atsinanana, no hozakain'ny fikambanana Save the Children izay:
manome azy ireo ny filàna fototra, tahaka ny sakafo sy ny bodofotsy, ary fandaharan'asa hanampiana azy ireo hizaka ny voina. Saingy mitombo isan'andro ny ankizy mandositra herisetra ka miatrika krizin'ny fampialokalofana izay miharatsy miharatsy izy ireo. Miangavy manolora ankehitriny. Ny fiarahantsika ho ahafahana manampy kilonga Syriana mialokaloka maro ahafahan'izy ireo mamakivaky ny mihatra amin'izy ireo, hanorina ny fiainany indray ary ho sitran'ny holatra navelan'ny ady tsimifaditrovana.